Taariikhda My Butros » Online Dating Waxaad Helitaanka Down?
Waad og tahay sidii ay tahay markii aad hadda uun soo diray in boqol jawaabin e-mail, nice nin / qof dumar ah in aad ayaa loogu sheekeeyo soo baxay waxaa lagu guursaday, mid ka mid ah in aad runtii jeclaa ayaa la waayay erayga la'aantiis iyo qofka aad la kulmay todobaadkii hore waa in ay sawir in ugu yaraan toban sano maxaa yeelay, isagu ma uu fiirin wax sidaas oo kale xagga jidhka! Waxay noqon kartaa quruxsan saamaynayso.
Ma ahan in aad macnaheedu in ay snobby, iyo runta waa dareemi karaa sida dadka aad kula kulantid internetka waxaa kulan ama ciyaaro, doonaya galmo, cadhooday jab ah oo ay garabka ku saabsan ex, waxaa ku dhuftey ul fool-xun oo markaas sawiro sawir-shopped ay si iyaga u eg model ama ay yihiin oo kaliya nuts Cad ah! Haddii in codadka adag ma waxaa loogu tala galay in, iyo in uu yahay run ahaantii sida ay dareemi karaan in mararka qaarkood in dunida shukaansiga online. Gaar ahaan haddii aad hesho jaded! Waxaa wax laga xumaado oo dhan ka dhigi kara in aad dareentid daal, careysan oo ka soo gubay. Mararka qaarkood waxaa xitaa laga yaabaa inay wax kaa su'aalo haddii uu jiro qof ka baxay waxaa aad u!
Marka kiiska ugu xumaa, waxaan ogahay in dadka aan sheed iska tuuro gebi, wacdiyaya shukaansigu online uma shaqeeyo, ama in ay tahay kaliya ee weirdos, ama aad naftaada u sheegto wax kasta oo version of sheekada. Fiiri Ma dhahayo aysan u muuqan xun marka aad u muuqdaan in ay la kulanto mid ka mid niyad jab kale ka dib, si kastaba ha ahaatee waxa ka dhigi kartaa farqiga dhan halkan waa isbedel yar oo aragti – kaliya a 'Bedelo' yar in ay siku kaas oo aad eegto shukaansiga online.
Waxa aad halkan xusuusan yahay in shukaansiga online furayaa aad 'suuqa diirada', taasoo la micno ah in ay tahay wax badan ka weyn waxa ay dib u lahaa marka shukaansi loo isticmaalaa in lagu meel u dhaxaysa kaliya rag iyo Mudanayaal ka wareegsanaa maxalliga ah aad qaadato. Markaasaa waxaa taas ka dhigan aad doonaysid in aad ka soo baxdid dhamaan noocyada kala duwan ee dadka. Aan dhan oo iyaga ka mid ah uu doonayo inuu ahaado qoyskaaga dad noocee dadka, oo aad had iyo jeer ma midkood Mudan. Tani waxay khusaysaa in aad loo eegin sida aad u wanaagsan tahiin iyo inta u heshaan laga yaabaa in aad. In dunida shukaansiga online waxa aanu u kala duwan badan, waxaa jira oo kaliya xaddi gaar ah oo 'u xoqdo iyo kuwa'. Oo waxaa laga yaabaa in a 'mugga' qaar ka mid ah dadka ay u badan tahay inay la kulmaan aad ka hor inta aadan ay la kulmaan 'mid ka mid ah', (haddii aad tahay qof aad u nasiib badan). Xusuustana waxa lagu hal qof ayaa qashinka khasnad kale. Dhibku haddaba wuxuu imanayaa marka aan wax oo dhan qaadan weerar shakhsi ahaan.
Waxa kale oo in la xasuusto waa in marka aan loo isticmaalaa in lagu soo qabtay ee Jidka qadiimka, Kulanka dadka ie fool ka fool, waxaan inta badan wax yar oo iyaga ku saabsan ogaan lahaa ugu horeeyay, xitaa haddii ay ahayd oo kaliya waxa ay eegi dhab sida nolosha dhabta ah. Si kastaba ha ahaatee aad la shukaansiga online ma samayn, si aad doonaysid in aad soo gaarto dad badan oo aad lahayd ma dooratay taariikhda haddii aad uu la kulmay in qofka. Xitaa profiles akhriska aysan si aad siiso fikrad badan, sababtoo ah ka dib dhan, dadka soo bandhigaan oo kaliya ay kooxda ugu fiican oo ay profile. Aan si daacad ah, waxay u dhowdahay in qof qori lahaa 'xanaaqsan, narcissist Xasad naftooda la halitosis iyo timaha yar ka soo wajahday oo doonaya haweeney fiican loo kariyo casho uu isaga '.
Sidaa darteed waa par kooras ah in aad la kulmi doonaan dadka qaar in aad jeclaan lahaa inuu ka fogaado sida belaayadiina. Oo waa inaad qaar ka mid ah oo kaliya ma daneeyaan. Qaar ka mid ma noqon doonto xiiso aad ee. Qaar ka muuqato xiiso ka dibna baabi'i. Haddii aad aqbali karto in dhammaan of this waa ka qayb iyo badh la shukaansiga online ka dibna aad Liibaanaysaan badan oo fiican. Sida in aad si fudud dhoola karaan, qososho naftaada oo ku Dhihi 'NEXT'. Markaas hesho daafaca midig faraska.
Ha qalbi jabine. Ka dhigo mid Bedelo yar si aad u dabeecad saabsan shukaansiga online, ka dibna bax halkaas oo ay leeyihiin qaar ka mid xiiso leh, lalana xiriiro dad badan oo kala duwan. Chat, rumowday, tag on taariikhaha qaar ka mid ah, naftaadana u raaxaysatid, iyo cid og, laga yaabee in aad 'mid ka mid ah' waa soo dhow ee soo socda.